देश, खनाल र चौधरीहरु
देश हाँक्ने ठेक्का पाएकाहरुका गलत अभ्यासका बारेमा धेरैले थुप्रै मसि बगाए, मैले पनि जानी नजानि केहि लेख्ने प्रयास गरे हुँला । तर लाग्दैछ, जति लेखे पनि शासकहरुको मति बिग्रेपछि इन्द्रेको बाउ चन्द्रेको पनि केहि नलाग्दो रै’छ ! चित्त बुझ्ने काम फिटिक्कै गर्दैनन् गाँठे, बाहिर सपाट चरित्र देखाउन खोज्छन् भित्र सर्वाङ्ग नांगा छन् । यिनको यो गतिछाडा र टीठलाग्दो व्यवहार देख्दा म आफैदेखि उदेक लाग्न थाल्छ । अनि यसो सोच्छु, यी हुँडारहरु हुन् यीनले हामी निम्छरा जनताहरुलाई प्रजाबाट उठेर स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएर उठ्न कहिल्यै नदिने भए ।
न आफू गर्छन, न केहि सपार्न चाहनेलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन्छन् । हुँदा हुँदा पत्रकारिताका नाममा मुखपत्र चलाइरहेका केहि बज्रस्वाँठहरु तीनका गलत काम सहि हो भनि प्रमाणित गर्न भगिरथ प्रयासमा समेत लागिपर्छन । प्रसंग रामेश्वर खनालका बारेमा उठाउन खोजिरहेछु म । उनका कामका बारेमा म हिजोसम्म बेखबर थिएँ । केहि उल्लेखनीय र सबल उनका कदमका बारेमा मैले आजभोली सुन्न पाइरहेको छु । हिजो उनका असल कदमका बारेमा पत्रिकाहरुले आवश्यक कभरेज गरेनन त्यसैले म बेखबर थिएँ, अकस्मात उनको राजीनामा आएपछि पो म झस्किएँ – उनका सबलताका बारेमा पढ्ने अवसर पाउँदा । हुन त हाम्रो संस्कृति नै यस्तो, केहि अपवादहरुलाई छाडेर भन्ने हो भने, कुनै पनि ब्यक्तिको असल कामका बारेमा कि त हामी ऊ अवसानको संघारमा पुग्दा वा उसको शेषपछि नै उठाउने गर्छौ । हिजो ओहोदामा रहेर काम गर्दा सम्म उनका असल अभ्यासहरु समाचारका शिर्षक बन्न पाएनन अहिले राजीनामा आएपछि आश्चर्यजनक ढंगले उनका असल अभ्यासका बारेमा अत्यन्तै राम्रा टिकाटिप्पणीहरु सुन्नमा आएका छन् । खैर, कुरा जेसुकै होस् तर कुरोको चुरो भनेको देश हाँक्नेहरुको नियतमा खोट अवश्य नै छ ।
अरे, नक्कली भ्याट बिल कारोबार गरेर देशको राजस्व डुबाउन दिनुहुन्न भन्दा एउटा राष्ट्रसेवकलाई सहयोग गरेन भनेर दबाब दिनु न्यायसंगत हो ? घरजग्गा कर्जामा अनावश्यक लगानी बढाएर तरलताको अभाव हुन दिने काम गलत हो भन्दा अनावश्यक दबाब दिनु कति न्यायपूर्ण हो ? कम्युनिष्ट भनिएकाहरुको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ खनाल नेतृत्वको यो सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु आवश्यक छ कि छैन ? के ठूला ब्यावसायिक घरानाका सदस्यहरु तिम्रा दलका अन्नदाताहरु हुन भन्दैमा यो देशमा उनीहरुलाई जे गर्न पनि छुट छ ? जबाफ चाहिएको छ । पैसा, राजनैतिक संरक्षण र शक्तिका आडमा जे पनि गर्न छुट छ भने काशिराम गुरुङहरुलाई किन भूमिगत हुन बाध्य पारेका छौं ? लेनदेन नमिलेर हैन ? जनता अनबिज्ञ छैनन् यी विषयहरुमा ! यो देश नबन्नुका पछाडि सबैभन्दा दोषी पैसामा बिकेका दलका नेताहरु हुन भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्गै भएको कुरा जगजाहेरै छ । हैन खासमा कहिले आउँछ यिनीहरुको सद्बुद्धी ? हुन त बुद्धी भए पो सद्बुद्धी आउनु ! यिनका मस्तिष्कमा धमिराले गोलो लगाएको छ, जहाँबाट जनताको हितका लागि, देशको सम्बृद्धिका लागि आवश्यक असल बिचारहरुको उत्पादन हुन्छ भन्ने सोच्नु नै बेफ्वाँकको कुरा हो ।
अन्त्यमा, रामेश्वर खनालको राजीनामाले हामीलाई प्रस्टै छर्लङ्गाएको छ, यो देशको राज्यसंचालन ब्यवस्था कहाँबाट कसरी निर्देशित छ ? राजनीति र सामाजिक सेवाको खोल ओढेर अनि उध्योगपतिका ट्याग भिरेका बिनोद चौधरीहरुको चलखेलले कति प्रभाव पार्दो रैछ यहाँको राज्य सञ्चलानमा ? सफा पानिमा देखिने जिवन्त प्रतिबम्ब झैं स्पष्ट भएको छ । किन जमिम शाह र युनुस अन्सारीहरुको कुबेर बन्ने उत्कट महत्वकांक्षा बन्दो रै’छ, त्यो पनि बुझ्दैछु, आज । यो देशमा पैसा भए जे पनि गर्न मिल्ने अवस्था बनाउँदैछन् दलका नेताहरु ! रामेश्वरको राजनिामाले मलाई कम्तीमा पनि बुझाईदिएको छ, एउटा सत्य — आखिर कम्युनिष्ट भनौंदाहरुले आफ्ना चुलिएका महलहरु बनाउँदा कहाँबाट पाएका रहेछन् आर्थिक श्रोतहरु ! अब हामी अर्धबेहोस मान्छेहरुले चेतमा आउने समय भएको छ, यहाँ जसले धेरै देश बनाउने सपना बाँडिरहेछन् तीनले पर्दाभित्र देश लुटिरहेछन् ! आउनुस हामी सबै गोलबद्ध भई राष्ट्रसेवक खनालहरुका पक्षमा वकालत गरौं, सँगसँगै खबरदारी पनि गरौं प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बसेर राष्ट्रघात गर्न खोज्ने खनालहरुको !
यो लेख नबबिकल्प साप्ताहिकका लागि सुरक्षित गरिसकिएको छ । तसर्थ अन्य छापाका पत्रिकाहरूमा यो लेख पुनःप्रकाशन गर्न सख्त मनाही छ ।